Iyo yazvino OneDrive inogadziridza inokwereta zvimwe zveGoogle Mifananidzo 'akanakisa maficha
Iwo achangoburwa maOneDrive maficha anotarisa pane kugadzirisa foto uye manejimendi.
Microsoft yakazivisa mashoma mashoma maficha neazvino kuvandudza kune OneDrive.
Zvese zviri zviviri webhu uye nharembozha izvozvi zvinosanganisira yekutanga foto mupepeti.
Microsoft irikujekesa zvakare chikamu chekukanda uye iri kuuya pikicha murongi.
Microsoft is kutanga akati wandei maficha eOneDrive kuitira kuti zvive nyore kune vashandisi kubata mapikicha avo.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kuuya kuOneDrive ndeye mupepeti mupepeti. Kunyange isiri yakasimba se chii chinopihwa muGoogle Mifananidzo, Inopa vashandisi ekutanga ekugadzirisa mabasa sekucheka, kuwedzeredza kutenderera, uye kwakasiyana mwenje uye kugadziridza kwemavara. Ehezve, aya mabasa anogona kuwanikwa mune mazhinji e nhare dzakanakisa dzeAndroid, asi zvakanaka kuvaona vachiuya kuOneDrive seimwe yekugadzirisa sarudzo kune vashandisi.
Iyo nyowani mhariri iri kuburitsa izvozvi pawebhu uye iyo OneDrive Android app. Zvishandiso zveIOS zvinogamuchira mupepeti gare gare gore rino.
Mumwedzi mishoma inotevera, OneDrive ichaita kuti zvive nyore kuronga mifananidzo yako nechishandiso chitsva chekutonga. Zvino kana mifananidzo yaiswa kune OneDrive, inogona kuiswa otomatiki mumafaira akasiyana zvichienderana nekwakatangira mufananidzo. Saka ikozvino mafoto kubva kunzanga enhau maapplication, mameseji maapplication, screenshots, nezvimwe, zvichazoendeswa kune avo akasiyana maforodha.
Pamusoro pezvo, vashandisi vanogona kusefa zviri nyore kuburikidza nemifananidzo yavo neimwe nyowani firita sarudzo, zvichiita kuti zvive nyore kungoona mafoto kubva kune akasarudza maforodha. Iyi ficha inowanikwa ikozvino, kunyange otomatiki dhairekodhi kurodha pasi kuchasvika munguva pfupi.
Chekupedzisira, Microsoft iri kuratidza kugona kukanda kubva kuOneDrive. Iyo icon inogara kumusoro kuruboshwe kweiyo Android app, ichiita kuti zvive nyore kuratidzira mifananidzo yako nemavhidhiyo kuburikidza nevatambi veChromecast vakaita Chromecast neGoogle TV uye akanakisa Android maTV. Iyi ficha inofanira kuwanikwa pane zvishandiso zveApple manje.
Nezvinhu izvi zvitsva, OneDrive iri kuve chipo chakasimba kune vashandisi vanofarira Microsoft's cloud solution kune vakwikwidzi vakaita seGoogle neApple.
Microsoft yeGoogle Mifananidzo
Mahara paGoogle Play Store
Kune chero munhu asina kubatwa neGoogle services
Microsoft OneDrive igore rakakura mhinduro kune chero munhu anoda kubuda kure neyeGoogle ecosystem. Iyo inoratidzira otomatiki pikicha yekuchengetedza, kugovera faira, kuverenga magwaro, uye kunyange kuyananisa zvinyorwa zvako zveshoko pamadhizaini.
Chinja mapikicha edhijitari kuve ndangariro dzakadhindwa neaya epamhepo mabhuku emifananidzo
25 Tricks kuna Master Google Photos
Iwo makumi maviri Akanaka Vhidhiyo Ekugadzirisa Mapurogiramu e20
Mashandisiro aunoita OneDrive kuwana mafaera ako pane ako Windows 10 PC
Sevha Desktop, Zvinyorwa & Mifananidzo Kune OneDrive In Windows 10